Daawo aroos yaab leh oo ay dhigatay Fiska
Cajiib Daawo fanaanada Fiska oo sida Hindida u guursatay fanaan caan ah madaxana Sanduur isku mariyeen yadoo ranji cas intuu soo qaaday fooda timaheeda mariyey Mashxaraduna dhacday haddaba qaabki uu u dhacay . HALKAN RIIX OO KA DAAAWO Follow
Yaa ugu xidhay Kamarada qarsoon qolki ay ku baashaalayen Hodan
SUBXAN ALLAH Guri ku yaalla Boorama xaafada Shacabka oo ay joogeen lamaanaha loogu hadal haynta badan yahay social mediaha #Hodan Cabdiraxman Dheere iyo #Mursal Muse Cumar ayaa loogu xidhay kamarada qarsoon yagoo qol ka mid ah ku baashalaya Haddaba yaa ugu xidhay. HALKAN GUJJI OO KA DAAWO Follow
Daawo Qaabki Mobilka loogu duubay Marki u xildhibaanku feedh la
Subxan Allah Daawo qaabkii loogu duubay Mobilka markii xildhibaanku gabadha xildhibaanada ah feedhka la dhacayay Nairobi. HALKAN GUJJI OO KA DAAWO Follow
Daawo Fanaanada Hodan Cabdiraxman maxay ka tidhi heesta muranka wayn
Daawo fanaanada Hodan cabdiraxman Dheere Maxay ka tidhi heesta Muranka wayn dhalisay ee ay so saartay iyo ciday ku socoto. HALKAN RIIX OO KA DAAWO Follow
Subxan Allah Daawo yaa faafiyey muuqaalka galmadaa ah ee laga
Subxan Allah Daawo yaa faafiyey muuqaalka galmadaa ah ee laga duubay fanaanadan caanka ah , HALKAN GUJJI OO KA DAAWO Follow